Pro Goo Final hadda taagan sida software tafatirka ugu cusub iyo video ee muddooyinkii dhowaa ayaa waxaad fartaan Wannaagga ka bilowday is-hoosaysiiya inuu weynaado galay waxa uu yahay maanta. Apple, bartey, ma baajiyo inuu soo jiito oo uu ka shaqeynayay Pro Final gooyay X, keeni tan oo horumar kaas oo ay leeyihiin oo iyana ka caawiyay guusha qalab tafatirka this ee suuqa maanta.
Marka Final Cut Pro dib soo bandhigay sanadkii 2011, Apple ee dhagxbaa macaamiisha ahaayeen yaabayaan iyo qaab ay interface user hagaajiyo iyo sidoo kale lagu daro kala duwan loogu talagalay in lagu wanaajiyo waxtarka codsiga iyo taageeridda hardware cusub iyo sidoo kale nidaamyada hawlgalka iyo ugu dambeyntii isbedel saaxadda tafatirka video ay tahay ka wanaagsan. Inkastoo Pro Final gooyay X heshay share cadaalad ah loo dhaleeceyn, oo ay ku jirto ay taageero la'aanta tafatirka multicam, codsiga sii si aad u hesho downloads turjimaysa sida users dheeraad ah oo ay maal-awoodaha ay video tafatirka. Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa sida shaandhada in lagu daro in Pro gooya Final on Mac.
Qaybta 1aad: Sida loo dar-safeeyuhu in Final Cut Pro On Mac
Markii la isticmaalayo Pro Final Goo, tab filtarrada waa meesha saameyn ku clips muuqdaan iyo meesha aad ka heli doonaa koobin si ay u qabsato. Filter kasta oo aad u baahan tahay waxaa laga heli karaa gudahood Raadka Tab taas oo uu furmo suuqa kala gooni ah la tab ku yaala dusha sare ee suuqa kala browser. Tab gudihiisa, oo aad ka heli doontaa liis dheer oo noocyada kala duwan ee saamaynta. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii aad xiiseyneyso kaliya in diirada, ay ku yaalaan gal gaar ah filter kasta ay subfolder u gaar ah. Si aad u furato diirada, guji xagal siidaynta u muujiyo filter kasta. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad shaandhada isku dari kara ka, gujinaya xagal siidaynta muujin doonaa tiro balaadhan oo ah saamaynta isku dari kara uu ka soo xusho.
Filtarrada Cut Pro Final ayaa waxaa loo dhisay inuu kaa caawiyo inaad bedelo ama kor loogu qaado muuqaalka kore ee clips ku saabsan waqtiga. Sida diirada kaliya codsatay in ay clips jira. Hoos waxaa ku qoran talaabo hagitaan talaabo talaabo si ku daray diirada inay Final Cut Pro on Mac.
Talaabada 1: Load Clips
Shuban-ga ee aad rabto in aad wax ka bedel iyo doorasho clip ku saabsan waqtiga meesha aad rabto in aad diirada u muuqdaan.
Talaabada 2: Dooro Filter ah
Riix tab Raadka si loo helo diirada. Wuxuu furaa category filter la doonayo dooro filter mid ku haboon clip.
Talaabada 3: Load Iyo Habee Filter ayaa
Isbedel ku filter ee la doortay si ay u habboon clip Waxaad samayn kartaa.
Halkan waxaan jeclaan lahaa in wadaagaan Waxa Ayidaya iyo Diidaya u Pro Goo Final aad u sidoo kale.
Xoog fududahay in la isticmaalo
Maamulka file Better warbaahinta filaayo
Kala duwan Wide ee xirfadle ah qaabab video
Fursadaha saxo midabka daalacan
Saamaynta Customized iyo presets
No fursadaha raadraaca saamayn maaskaro
Presets badbaadin ayaa la koobiyeyn karaa inta u dhaxaysa nidaamyada
Ka maqan dhisay khiyaar abuuro qaababka maaskaro saamayn caadadii
> Resource > FCP > Sida loo dar-safeeyuhu in ay Final Cut Pro On Mac